HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အဆိုပါ IMM Metrobus ရပ်တန့်အတွက်အကြောင်းရင်းများ၏သိပ်သည်းဆကိုကြေညာ
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metrobus, တူရကီ 0
အဆိုပါ IMM အတွက် metrobus ဘူတာရုံ၏ပြင်းထန်မှုအဘို့အသောအကြောင်းပြချက်ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), အ Metrobus အတွေ့အကြုံပြင်းထန်မှုနံနက်ယံ၌ရပ်တန့်မှုကြောင့်ကားကိုပျက်ကွက်မှကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့်ဘာသာရပ်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းအဆိုပါကြေညာချက်ကဆိုသည်: ဤနံနက်အစ္စတန်ဘူလ် 07 အတွက်: 59 IMM ကားကိုဘူတာရုံလူမှု်ဆောင်မှုများအတွက်တစ်ဦးအပြစ်ရှာဖန်ဆင်းတော်မူပြီမုဆိုးများ၏ Metrobus လိုင်း။
08 başlanmıştır.xnumxတစ်လမ်းကျမ်းပိုဒ်ပေးထားစေမည်အကြောင်း, ထိန်းချုပ်မှုဘူတာရုံကြီးကြပ်ရေးမှူးမှပြောင်းရွှေ့ထားပါတယ်: 00 08 04 တစ်ခုတည်းဘတ်စ်ကားမောင်းသူမှအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းမမှန်ကန်ကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာကို detect, ထိုယာဉ်တန်းထဲကလိုင်းနှစ်ခု-လမ်းပိတ်ပစ်ရန်ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
08: အကြားဝင်ပုံမှန်ပြန်ရောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ xnumx't နှင့်အတူ Metrobus လိုင်း။
အလားတူပျက်ပြားခြင်းနှင့်နှောင့်အယှက် Metrobus နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းမဆိုပိုပြီးရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သောသတိပေးချက်များဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
ကြောင့် Two-လမ်းကဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ၏ပြင်းထန်မှုမှ 10 မိနစ်ချောင်းမြောင်းအသွားအလာပိတ်ထားခြင်းနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မှတောင်းပန်လိမ့်မယ်, ကျနော်တို့အစီအမံအလားတူပြဿနာမဆိုအထပ်ထပ်တားဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဖော်ပြလိုပါသည်။
ကြုံတွေ့metrobüsteသိပ်သည်းဆ '' စမတ် sistem'l ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မည် 09 / 08 / 2012 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas, အ Metrobus '၌ကြုံတွေ့ပြင်းထန်မှု, သူမတ် sistem'l ကျော်လွန်သွားကဆိုသည်။ ဂျာနယ်လစ်တီထွင်မှု Topbas နှင့်အတူ Iftar သည်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှင့်စီမံကိန်းများ, အထူးသဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ Kadikoy-Kartal Metro Topbas, အစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုရည်ညွှန်းပှဲအတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ် 2016 အတွက်အကြီးအကျယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်ဟု၎င်းကဆိုသည်။ အဆိုပါ Metrobus Topbas အတွေ့အကြုံပြင်းထန်မှုကိုရည်ညွှန်းသငျသညျကြောပိတ်ဆို့မှုကိုသတိပြုမိ, ပါလိမ့်မယ်လမ်းကြောင်းအသွားအလာသူတို့အနေနဲ့အသိဉာဏ် system ကိုသက်ဝင်စေဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ Topbas, 'ဤစင်တာကိုသာ Metrobus စစ်ဆေးသည်မည်ဖြစ်သည်။ System ကိုခရီးသည်လူအစုအဝေးမြင်ရပါလိမ့်မည်, ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းများအကြားရေဒီယိုပြောဆိုမှုများစစ်ဆေးသွားမှာပါ "ဟုသူကပြောသည်။ အဆိုပါ minibuses ၏အဓိကသွေးလွှတ်ကြောအပေါ်ရှင်းလင်းချက်အားဖယ်ရှားပါလိမ့်မည် ...
FSM သော့ခတ်ခဲ့သည်! သိပ်သည်းဆ Metrobus ရပ်တန့်အိပ်မက်ဆိုးထဲမှာလှည့်ခဲ့သည် 29 / 06 / 2019 အဆိုပါ Fatih Sultan Mehmet တံတားအတွက်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စုစုပေါင်း 52 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းယူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အသွားအလာမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်အောက်ပိုင်းသေခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နွေရာသီအချိန်ဇယား၏သွားတာနဲ့အတူပေးနေတာနှစ်ဆတိုးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ကားများထွက်ခွာနိုင်ငံသားများ Metrobus များ၏ပြင်းထန်မှုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေဒီအချိန်ထွက်ပြေးလာသောဖမ်းမိခဲ့သည်။ စတုတ္ထမြို့တစ်နေ့တာ၏အချိန်အသွားအလာအတွက်3နာရီရှိခြင်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စာရင်းဇယားနိုင်ငံသားများသည်နှင့်အညီ, ဥရောပမြို့ကြီးများအတွက်အသွားအလာအမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆရှိပါတယ်။ ကိစ္စတွင်မွို့၌ကိုယူမယ့်အကြီးစား inextricable နေ့တိုင်းအသွားအလာအစီအမံဖြစ်ပါသည်,3ဖွင့်လှစ်။ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမျိုးအဖြစ်အသစ်သောလမ်းကြောင်းများနှင့်အသစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများ Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကြားမှတံတား ...
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့်မီထရိုလိုင်းဘူတာအမည်များ၏ Metrobus Metrobus ဘူတာ 24 / 08 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus လိုင်း Metrobus ဘူတာက Metro ဘူတာအမည်များ: အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus Lines (လက်ရှိ), Avcılar Metrobus, ရထားစနစ်များ, Aksaray လေဆိပ်လိုင်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်က Metro နှင့် Metrobus ရပ်, အစ္စတန်ဘူလ်သင်မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအစီအစဉ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်အောက်တွင်။ ပိုကြီးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုရန်ပုံရိပ်တွေအပေါ်မြေပုံနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံအဘို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အသစ်ကဆက်ပြောသည် Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်းနှင့်ဘူတာရုံအမည်များအသစ်စက်စက်ဖွင့်လှစ် Kadikoy Kartal မက်ထရိုလိုင်းတစ်ဦးစုစုပေါင်း 16 ဘူတာရုံရှိပါတယ် map ။ လောလောဆယ်ဘူတာရုံအမည်များကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်: Kadikoy, Ayrılıkçeşme, Acibadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, ဘော့, Küçükyalı, သူနာပြုနေအိမ်များ, rosewater, Esenkent ...
| İETT Metrobus Metrobus Karsan ထံမှတင်ဒါရှင်းပြချက်အနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ Metrobus တင်ဒါ 27 / 07 / 2012 İETT "ဟုအဆိုပါတင်ဒါအောက်မှာကတခြားနည်းလမ်းဖြင့်နည်းပညာပိုင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအရနှိုင်းယှဉ်တစ်မှန်ကန်သောချဉ်းကပ်မှုမဟုတ်ပါ, လက်ရှိတွင်မော်တော်ယာဉ်များတွင်အသုံးပြု Metrobus လိုင်း" Karsan ကနေဖန်ဆင်းတော်အနိုင်ရနူးညံ့သောကြေညာချက်, metrobüseကပြောသည်။ İETT 200 စုစုပေါင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဘတ်စ်ကားဝယ်ယူနှင့် 250 စုစုပေါင်းအများဆုံးချွေကမ်းလှမ်းမှုကို Karsan ကပေးတဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ဖြင့်ဖုံးအုပ်နူးညံ့သောအားဖြင့်ဘတ်စ်ကားဝယ်ယူရေးတင်ခဲ့သည် Karsan ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်မှာတော့ "ဟုအဆိုပါတင်ဒါဥပဒေများအညီအားလုံးသင်တန်းသားများကိုရေးသားခြင်း၌ဤအမှုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဇူလိုင်လ 25 2012 ဖြစ်စဉ်တွင်ဘတ်စ်ကားများဝယ်ယူရေးနှင့် ဆက်စပ်. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပေါ်စာနယ်ဇင်းများတွင်ဆက်လက် ...
ကြုံတွေ့metrobüsteသိပ်သည်းဆ '' စမတ် sistem'l ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မည်
FSM သော့ခတ်ခဲ့သည်! သိပ်သည်းဆ Metrobus ရပ်တန့်အိပ်မက်ဆိုးထဲမှာလှည့်ခဲ့သည်
Altepe ကရှင်းပြခဲ့သည်: အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှခွဲဝေခံရဖို့လမ်း Mudanya အလယ်တန်း, Metrobus လိုင်းဖွစျလိမျ့မညျ
Recep Altepe ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်: အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှခွဲဝေခံရဖို့လမ်း Mudanya အလယ်တန်း, Metrobus လိုင်းဖွစျလိမျ့မညျ
စွပ်စွဲ ESTRAM ရပ်နားလုံခြုံရေးအရာရှိတွေက၏လုပျငနျးဖယ်ရှား
Eskisehir အတွက်လုံခြုံရေးစောင့်တပ်အဘို့ကြောက်ကြဓါတ်ရထား Stop သင်တန်း